Airtel Thanks အက်ပ်တွင် Kaspersky လုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်ဖြင့် သင်၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်ပါ - Clickfor.net | ဧည့်သည်ဘလော့ | ဧည့်သည်ဘလော့ကို တင်ပါ။
15 49.0138 8.38624 မြှား0မြှား04000 1 ရေပြင်ညီ https://www.clickfor.net 30001
374 Views စာ
Airtel Thanks အက်ပ်တွင် Kaspersky လုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်ဖြင့် သင်၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာသည် အွန်လိုင်း သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာနှင့် ပိုမိုပေါင်းစပ်လာသည်နှင့်အမျှ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများအတွက် အန္တရာယ်သည် ပိုမိုထင်ရှားလာပါသည်။ ၃၉ စက္ကန့်တိုင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ၎င်းသည် တစ်ရက်လျှင် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း 39 ကျော်ရှိသည်။ အွန်လိုင်းပြောင်းနေတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုအတွက် အတော်လေးကို စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ နံပါတ်တစ်ခုပါ... ဆက်ဖတ်ရန်
မင်းရဲ့ Social Media Marketing ကို ပြောင်းလဲဖို့ အော်ဂဲနစ် စည်းမျဉ်းတွေက ဘာတွေလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာသည် အွန်လိုင်း သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာနှင့် ပိုမိုပေါင်းစပ်လာသည်နှင့်အမျှ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများအတွက် အန္တရာယ်သည် ပိုမိုထင်ရှားလာပါသည်။ ၃၉ စက္ကန့်တိုင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ၎င်းသည် တစ်ရက်လျှင် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း 39 ကျော်ရှိသည်။ ၎င်းသည် နှုန်းထားဖြင့် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ရွေ့လျားနေသော ကမ္ဘာတစ်ခုအတွက် အတော်လေး စိုးရိမ်စရာ နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤအချက်များကို စိတ်ထဲစွဲမှတ်ထားပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းမွန်သော လုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဆင့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုက လူတိုင်းအတွက်ပါပဲ။
တစ်ဦးချင်းစီနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်များကို ပေးဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီများစွာရှိသော်လည်း Kaspersky လုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်များသည် Airtel Thanks အက်ပ်အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက် တတ်နိုင်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခု ပေးပါသည်။ သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ် ငွေပေးချေမှုအက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ Kaspersky မှ ထိုသို့သောကမ်းလှမ်းမှုများကို ရရှိနိုင်သည့်အတွက် Airtel ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို နက်နက်နဲနဲ မလေ့လာမီ၊ တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့် Airtel Thanks တွင်ရနိုင်သော Kaspersky Total Security အစီအစဉ်အကြောင်း ပိုမိုနားလည်ကြပါစို့။
Kaspersky Total Security Plan သည် Rs သာဖြစ်သည်။ Airtel Thanks အက်ပ်တွင် ၃၉၉/နှစ်
Kaspersky နှင့် Airtel ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသစ်ကြောင့် သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ PC နှင့် စမတ်ဖုန်းများအတွက် Kaspersky ၏ လုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်များကို Airtel Thanks အက်ပ်တွင် လျှော့စျေးဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Kaspersky Total Security သည် အခြေခံအားဖြင့် သင်နှင့် သင့်မိသားစုအတွက် ပရီမီယံလုံခြုံရေးအစုံဖြစ်သည်။ မူလစျေးနှုန်းမှာ Rs. တစ်နှစ်အတွက် 799 ၊ အဖြေကို Rs ဖြင့်ရနိုင်သည်။ Airtel Thanks အက်ပ်တွင် ၃၉၉/နှစ်။
အစီအစဥ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်သဘောပေါက်ရန် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
Total Security suite သည် စက်ပစ္စည်း 1 ခု (PC၊ MAC သို့မဟုတ် စမတ်ဖုန်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်) 399 ဖြင့် တစ်နှစ်ကျော်ကြာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Thanks အက်ပ်မှ အစီအစဉ်ကို ဝယ်ယူပြီးနောက်၊ Kaspersky မှ လိုင်စင်ကီးတစ်ခု ရရှိပါမည်။ သော့သည် စက်တစ်ခုအတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
အစီအစဉ်တွင် worm နှင့် trojan သို့မဟုတ် botnets၊ rootkits နှင့် rogues များကဲ့သို့ ဘုံနှင့် ရှုပ်ထွေးသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရှာဖွေနိုင်သော Antivirus software ပါ၀င်ပါသည်။ သင်နှင့် သင့်မိသားစုလိုအပ်သော လုံခြုံရေးအတွက် Airtel Thanks ဟု အမည်ပေးထားသည့် ငွေပေးချေမှုအက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလိုက်ပါ။
Anti-malware ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် အလွန်အဆင့်မြင့်သည်။ ၎င်းသည် အမျိုးမျိုးသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်-
ဤအခန်းသည် အခမဲ့ 'Safe Kids' ပရီမီယံလိုင်စင်ကိုလည်း ပေးပါသည်။ သင့်ကလေးများဘေးကင်းစေရန်အတွက် အဆင့်မြင့်မိဘထိန်းချုပ်မှုများအတွက် အင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ရှုပ်ထွေးတဲ့ စကားဝှက်တွေကို မှတ်မိဖို့က တော်တော်ခက်ပါတယ်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ရက်များနှင့် ဒေတာများကို ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်အတွက် ရှုပ်ထွေးသော စကားဝှက်များကို ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ Kaspersky's ဖြင့် သင့်စကားဝှက်များအားလုံးကို သီးသန့်နေရာတစ်ခုတွင် လုံခြုံအောင်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပရီမီယံစကားဝှက်မန်နေဂျာအတွက် အခမဲ့စာရင်းသွင်းမှုတစ်ခုပါရှိသည်။
Airtel Thanks တွင် Kaspersky ၏ Total Security Premium suite ကို မည်သို့ ဝယ်ယူနိုင်မည်နည်း။
Airtel Thanks အက်ပ်တွင် အစုံဝယ်ရန် အလွန်လွယ်ကူသည်။
ငွေပေးချေမှုအက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ - Google Play Store သို့မဟုတ် Apple စတိုးမှ Airtel ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သင့်မိုဘိုင်းနံပါတ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ပြီး အကောင့်ဝင်ပါ။
မျက်နှာပြင်အောက်ခြေရှိ 'စျေးဝယ်ခြင်း' ကဏ္ဍသို့ ဦးတည်သွားပါ။
'လူနေမှုပုံစံ' ကဏ္ဍကို စစ်ဆေးရန် အောက်သို့ဆင်းပါ။ ဤတွင်၊ Kaspersky ၏တက်ဘ်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကမ်းလှမ်းချက်အကြောင်း နောက်ထပ်ဖတ်ရန် ၎င်းကိုနှိပ်ပါ။
Airtel Thanks အက်ပ်ဖြင့် အစီအစဉ်တွင် 50% လျှော့စျေးကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကိုဖတ်ရန် အောက်သို့ဆင်းပြီး 'ကျွန်ုပ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Kaspersky နှင့်မျှဝေရန် သဘောတူသည်' တွင် အမှန်ခြစ်နှိပ်ပါ။
ထို့နောက် Buy now ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ပေးဆောင်ရမည့် စုစုပေါင်းပမာဏ ပါ၀င်မည့် တက်ဘ်အသစ်တစ်ခုသို့ သင့်အား လမ်းညွှန်သွားပါမည်။ Airtel Thanks သည် ငွေပေးချေမှုအက်ပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သောကြောင့် UPI၊ ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်နှင့် Net Banking တို့ကို အသုံးပြု၍ ပမာဏကို အလွယ်တကူ ပေးချေနိုင်သည်။
စာရင်းသွင်းမှုအတွက် ဘေလ်တစ်ခုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး Airtel Shop ကဏ္ဍရှိ စာရင်းသွင်းမှုများနှင့် မှာယူမှုစာရင်းတွင် ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ငွေပေးချေပြီးနောက်၊ သင့်အား လိုင်စင်သော့နှင့် ၎င်းကို စတင်သတ်မှတ်ပုံဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆက်လုပ်! သင့်မိသားစုအတွက် အထူးကောင်းမွန်သော လုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်များအတွက် 50% လျှော့စျေးရယူရန် Airtel မှ ငွေပေးချေမှုအက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ လျှော့စျေးများဖြင့် Airtel Thanks အက်ပ်တွင် စာရင်းသွင်းမှုများစွာကို စူးစမ်းလေ့လာပါ။ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးမှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာချေးငွေအထိ၊ Airtel Thanks သည် ကမ်းလှမ်းစရာများစွာရှိသည်။
စာရေးသူ၏ ပို့စ်အားလုံးကို ကြည့်ရှုပါ။
အိမ်အမြန်ရောင်းရန် ထိရောက်သော အကြံဥာဏ် ၇ ခု
Chromecast အတွက် အခြားရွေးချယ်စရာများ သင့် TV အတွက် သင်စဉ်းစားနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးစာပြန်ရန် Leave ပြန်မယ် Cancel
မှတ်ချက်တစ်ခုတင်ရန် သင်သည် လော့ဂ်အင်ဝင်ရပါမည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 11, 2019
အထူးတစ်စုံတစ်ဦးအတွက် Romantic Cruise ကို ကြိုတင်မှာယူရန် အကြောင်းရင်းများ
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် Mac နှင့် PC- ကွာခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။
အပြေးဘုတ်များသည် သင့်ယာဉ်ကို ပိုမိုလက်တွေ့ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဘာ့ကြောင့် Goog ရယူဖို့ စဉ်းစားသင့်သလဲ...
2020 Clickfor.net မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။